मौसमसँग लड्न तयार छु : कान्छो मेयर बरबरिया
किनभने जहाँ विरोध हुँदैन त्यहाँ विकासको कल्पना नगरे हुन्छ । तर विरोध चैँ सार्थक हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : ५ मङ्सिर, २०७५ | जनकपुरधाम| ०६:४५:००
धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका एवम् मुलूककै कान्छो मेयर उदय कुमार बरबरिया यादवले मौसमसँग लड्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
तराई मधेसमा प्रत्येक वर्ष शितलहर तथा जाडोका कारण सयौँ सर्वसाधारणको ज्यान गएको आँकडालाई मध्यनजर गर्दै कान्छो मेयरले आफ्नो नगरपालिकाका सर्वसाधारणलाई त्यस्तो समस्या आउनु पूर्व नै त्यसलाई निराकरणको लागि कसरत थालेको बताएका छन् ।
आफ्नो नगरको विकास र नगर विकासको प्रयासको कारण देशमा मात्र होईन अन्य देशमा पनि चिनिने कान्छो मेयर बरबरियासँग हामीले पाँच प्रश्न गरेका थियौ । उहाँसँग हामीले गरेको कुराकानीको अंश :
प्रश्न : नगर विकासको लागि तपाई यो प्रदेशमै अग्र हुनुहुन्छ , धेरै आम जनता असन्तुष्ट पनि छ नगरमा यस्तो किन ?
मेयर : प्रदेशमा मात्र नभनौ न, नेपालभरिमै स्थानीय तहको विकासको कुरा गर्ने हो भने तपाई आफै पत्रकार हो र यहाँका आम जनताले पनि विकास अनूभूति नगरेको होईनन् । विभिन्न सँचारमाध्यमबाट त देशभरिको स्थानीय तहको अवस्था र विकासको बारेमा पढन सुन्न र हेर्न पाईन्छ । तर, नगरपालिकाको कुरा गरिरहेको छु, नगरपालिकामध्ये शहिदनगर नगरपालिकाको आम जनताले एक वर्षमा पाएको विकासको दाँजो अन्य नगरपालिकासँग गरेर हेर्नुस, अन्य भन्दा उत्तम पाउनुहुनेछ । तपाईले, असन्तुष्टताको कुरा गर्नुभयो, यो जरुरी पनि छैन की सबै त्यो विकासको भोग गरेको हुनुपर्छ र सन्तुष्ट नै हुनुपर्छ । विकासको नाममा भौतिक निर्माणको क्रममा धेरै जसोको भौतिक निर्माणमा असर हुन्छ र त्यसले गर्दा असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो तर जुन दिन त्यो विकासको मर्म बुझनेछ म ठोकुवाको साथ भन्छु असन्तुष्टी रहने छैन् ।
प्रश्न : ठिकै छ, अहिले जाडोको मौसम आएको छ , केही दिनमै शितलहर हुनेछ यहाँ । विशेष गरी ग्रामिण भेकमा शितलहरका कारण कैयौँ व्यक्तिको ज्यान गएको छ । तपाईले आफ्नो नगरको आम सर्वसाधारणको लागि के योजना बनाउनुभएको छ ?
मेयर : पोहोर साल पनि हामीले मौसमसँग डटेर युद्ध गरेका थियौ । शहिदनगर नगरपालिकाका जनताले शितलहरबाट पीडित हुने छैन । हामीले सकेजति गरेका हौ, विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगमा न्यायो कपडा देखि लिएर विभिन्न समाग्रीहरु वितरण गरेका थियौ । गत वर्ष मात्र ८ यस बढी घरधुरीलाई न्यानो कपडा वितरण गरेका थियौ । चुलो पनि बाँडेका थियौ । त्यो वर्ष कार्यसँचालको पहिलो अनुभव नै थियो तर यसपाली त कार्यसँचालन र नगरको जनताको लागि केही थप सोच्ने समय पनि मिलेको छ । यसपाली अति विपन्न, गरिब, अल्पसँख्यक, अति गरिबको जाडो र शितलहरसँग लड्न तथा बाँच्नको लागि पूर्व तयारी अवस्थामा छौँ । नगरको जनताले चिन्ता लिनु पर्दैन् ।
प्रश्न : तपाईले गत वर्ष ८ सय घरधुरीलाई त बाँडनुभयो, तर के त्यो वास्तविक पीडित थियो की सम्पन्न मुखौटाहरु ? जो की स्वर्सको आधारमा ती दानहरु खोसेर लगिदिन्छ ?
मेयर : हैन हैन त्यस्तो त भएन होला । म आफैँ पनि चिन्न सक्छु नगरका विपन्न जनतालाई । जसलाई त्यो समाग्रीको अति आवश्कता देखियो त्यही अनुसार हामीले वितरण गर्दै गयौँ । नगरपालिका कार्यालयबाट पनि जनतालाई राहत दियौ शितलहरमा र विभिन्न संघसँस्थासँग समन्वय गरेर जनतालाई राहत दियौ । तपाईले जुन भन्नुभयो की सम्पन्न मुखौटाहरु त्यस्तो थियो होला, तर मसँग को स्वर्स लगाउन आउँछ र ? यसपाली त झन आफैँ स्थलगत गएर घर हेरी, विपन्नता हेरी उसलाई चाहिने जतिको आवश्यक राहत दिन्छौँ मात्र मोटो र न्यानो कपडा होईन् । न्यानो कपडा मात्र विकल्प हुन समाधान होइन नी । हामी समाधान तर्फ जाँदैछौ र यसको लागि पनि केही नयाँ गर्नको लागि अहिले देखि नै मौसमसँग लड्न तयारी गरिरहेका छौँ । जनता हाम्रो ढुक्क होस् ।
प्रश्न : एउटै नगरमा राजनीतिक हिसाबले, पार्टीगत हिसाबले जनता राहत पाउँछ की आम तौरमा एकनासे वा जनप्रतिनीधिको दृष्टिकोणले ?
मेयर : तपाईले जनतासँग राजनीतिक कुरा लगाउनु भएन । मेरो राजनीतिक करियर बेग्लै हो, म भर्खर २६ वर्षको हुन लागेको छु । जनतासँग राजनीति गर्न मनले पनि मान्दैन । हो राजनीतिक हिसाबले चुनाव लडेपनि मलाई भोट भने व्यक्तिगत हिसाबले दिएर यही नगरका जनताले चुनेको हो । यीनिहरुसँग राजनीति गरे मलाई नर्कमा पनि वास हुँदैन । जनता जनार्दन लाई म भगवान स्वरुप मान्दछुु । हो, म स्वीकार गर्छु की मबाट पनि गल्ती भएको छ र हुन्छ पनि , आखिर ईन्सान हो नी । तर त्यो गल्ती जसले जनता पीडित हुन्छ, दुःखी हुन्छ म त्यसलाई कहिले दोहरयाएको छैन होला र दोहरयाउँदैन पनि । एकपटक त गल्ती भैहाल्छ नी । अहिले पनि धेरै कुराहरु जनताबाट नै सिक्दै छु । म यस क्षेत्रमा सम्पन्न व्यक्ति पनि होईन । जहाँ जनताले ममाथि औला उठाउँछ त्यहाँबाट मैले केही सिक्न पाएको छु । किनभने जहाँ विरोध हुँदैन त्यहाँ विकासको कल्पना नगरे हुन्छ । तर विरोध चैँ सार्थक हुनुपर्छ ।
प्रश्न : भनेपछि यसपाली तपाईले आफ्नो जनताप्रेमलाई सार्थक बनाउन मौसमसँग जुध्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
मेयर : जाडोको मौसम चढिसकेको अवस्था छ । केही दिनमै शितलहर आउँदै छ । तराई मधेसको पुस र माघ महिना त प्रचलित छ । पुस र माघको जाडो भनेर । यसपाली नगरका आम जनताको लागि मोटो लुगा सहित अति विपन्नलाई जाडो मौसमसम्म दीर्घकालिन उपाय सोच्दैछु । ठाउँ ठाउँमा दाउराको व्यवस्था गरेर सार्वजनिक धुँर गरेर जाडो छल्ने व्यवस्था गर्ने सोचेको छु । त्यस मौसममा कमैयाहरु जोकी दिनभरि काम गर्दा मात्र दुई छाक खान पाएको छ । शितलहरमा उनीहरुलाई कामको समय अनुकूल भए त्यसको लागि पहल गर्नेछु नभए शितलहरमा अवस्था हेरेर उचित राहत मिलाउने छु ।